→ #kismaayo Ciidan kala taabacsan Dowladda iyo Raaskambooni oo Jubbada Hoose ku dagaalamay & Xildhibaan ka hadlay Ciidan kala taabacsan Dowladda iyo Ururka Raaskambooni, ayaa waxay barqanimadii maanta ay ku dagaalameyn Deegaanka Hoosingow ee Gobolka Jubbada Hoose. Ilaa iyo iminka si sax ah looma garanaayo waxa dhabta ah ee dagaaladaan dhaliyay, balse waxaa lagu soo waramayaa in labada Ciidan, ay maanta si weyn ugu dagaalameyn Deegaanka Hoosingow. Daryanka hubka waaweyn ayaa waxay maanta gil gileen Deegaanka Hoosingow, iyadoo khasaaraha ugu badan ay ka dhasheen madaafiic ay labada dhinac isweydaarsanayeen, iyadoo ilaa 14 ruux la sheegay inay ku dhinteen, halka laba gaarina ay ku gubteen. Wararka ayaa waxay sheegayaan inaysan dagaaladaan ka qeyb qaadan Ciidamada Kenya ee fariisimaha ku leh Deegaanka Hoosingow, laakiin waxaa la sheegay in la arkaayay madaafiic ka soo dhaceysay fariisimahooda. Xildhibaan Khaliif Xaaji Xasan oo kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda Gobolada Jubbooyinka, ayaa wuxuu sheegay in dagaalo culus ay maanta ruxeyn Deegaanka Hoosingow. Xildhibaan Khaliif Xaaji Xasan oo wareysi gaar ah siiyay Idaacada Shabelle ee Magaalada Muqdisho, ayaa wuxuu sheegay inay wararka ku helayaan, in dagaaladaan ay ku dhnteen ilaa 14 askari oo labada dhinac ah. Xildhibaanka ayaa sheegay inaysan ka qeyb qaadan dagaaladaan Ciidamada Kenya, balse wuxuu ku eedeeyay in la arkaayay madaafiic xoogan oo ka soo dhaceysay fariisimahooda. Mr. Khaliif ayaa wuxuu tibaaxay in kolkii dambe ay Ciidamada Kenya ku soo baxeyn dagaalada, sidoo kalana wuxuu sheegay inay u kala dab qaadeen labadii Ciidan, ee wada dagaalamaayay. Ninka ka tirsan Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa wuxuu ku baaqay in la qaboojiyo dagaalada khasaaraha badan ee ka dhacay Deegaanka Hoosingow, lagana wada shaqeeyo sida uu yiri xasiloonida